Tantara / Kolontsaina - Noelson Chemicals Technology Co., Ltd.
Noelson Chemicals (Nanjing) Co., Ltd. ary Noelson Micro-Powder Industry Inc. dia manana enamboarina, natao indrindra ho an'ny fikarohana, fampandrosoana ary fanamboarana ny vy 0xide micaceous, 0xide vy andriamby ary 0xide vy voajanahary.
Tamin'ny 2000 ka hatramin'ny 2005
indrindra amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana amin'ny andian-pigment antirust, loko vaovao indrindra momba ny tontolo iainana antirust pigment sy famenoana fonction.
Ampahafantarinay ny haitao sy ny teknolojia simika mandroso avy any Amerika Avaratra-Andrefana, mahomby amin'ny famolavolana ny vokatra isan-karazany an'ny Superfine Ferro-Phosphore Powder, ary ireo vokatra ireo dia nasandratra sy neken'ny tsena. Amin'izao fotoana izao dia lasa mpamokatra lohan'ny famatsiana Superfine Ferro-Phosphore Powder any Shina isika.
Manipy tena amin'ny fikarohana sy fivoarana ao amin'ny Zinc Phosphate, Aluminium Tripolyphosphate, ary Phosphate Rust manohitra Pigments izahay, ireo vokatra farany mampiroborobo antsika izay mahafaly tanteraka ny tontolo iainana famaritana ny fenitra iraisam-pirenena. Amin'izao fotoana izao dia iray amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy entana any amin'ny faritra Azia-Pasifika izahay ary ireo vokatra aondrana erak'izao tontolo izao.
Ny fampifangaroana ny fampidirana sy famoronana, dia mamolavola andiany maromaro ny titanium Compound Ferro, Compound Red Lead, Poundment Antirust Compound ary Powder Super Rust. Teknolojia mandroso marobe, fanaraha-maso kalitao henjana, miantoka antsika ho mpitarika amin'ny indostria. Ny vokatray Powder Ferro-Titanium Powder efa eken'ny besinimaro amin'ny tsena, mahazo ny anjaran'ny tsena lehibe indrindra amin'ny indostria.
Noelson Chemicals (Shanghai) Co., Ltd. dia natsangana, indrindra amin'ny firosoana amin'ny famolavolana vokatra vaovao sy ny varotra, ny varotra ary ny birao fiasa ao Shina.
Manomboka ny famolavolana sy ny famokarana ny andian-Glass Flake, Glass Fiber, Glass Microsfera ary Vitreous Microsfera izahay, mampiorina ny haitao mandroso sy ny famolavolana simika avy any Japon, anglisy ary Etazonia, izahay no mpanamboatra voalohany indrindra hampivelatra ireo vokatra vaovao rehetra hihaona amin'ny filàna eo amin'ny tsena eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina, ary ny haitao misy ny flakes fitaratra misy ny vokatra azo avy amin'ny vokatra iraisam-pirenena.
Nanomboka ny 2006
Noelson Chemicals dia namoaka patanty sy thesis marobe tao amin'ny magazine. Toy ny (Fampiharana vovoka ferrophosforus Superfine, fivoarana ary fikarohana), (Ny teknolojia fampiharana vovoka conductive farany sy tatitra momba ny fikarohana ho avy) andian-dahatsoratra matihanina, navoaka tao amin'ny gazety iraisam-pirenena, nahazo laza ho an'ny indostria.
Namolavola andiam-pitaovana conductive sy antistatic vaovao izahay, toy ny Powder Carbon Conductive grady ambony, Conduction Zinc Oxyde, Polyaniline Conductive, Nonotubes Carbon Conductive, sns. Miezaka izahay mba ho mpanamboatra lehibe ao amin'ny faritr'i Sina ao anatin'ny 5 taona nanomezana ilay conductive vokatra.
Ampahany amin'ny vokatra vokarinay“REACH "fanamarinana avy any Eropa, ary Noelson dia mahazo Fanamarinana IS09001 / 2008.
Tamin'ny Desambra 2010
Famitana zavamaniry vaovao ao Shanghai Nanhui.
Tamin'ny Mey 2011
Ny famokarana vaovao ny tobin'ny vokatra phosphate dia vita.
hanafaingana ny fanavaozana sy ny fampandrosoana izahay, hiezaka ny ho mpanamboatra vovo-dronono faribolana, pigment ary fitaovana conductive any amin'ny faritra atsimon'i Shina sy Azia-Pasifika.